जाने होइन त गोसाइँकुण्ड ? - बडिमालिका खबर
जाने होइन त गोसाइँकुण्ड ?
३० कात्तिक, काठमाडौं । वर्षको एकपटक म यात्रामा निस्किने गरेको छु । विशेष गरी अक्टोबर महिनामा यात्रा गर्दछु । मेरो जन्म महिना पर्ने भएकाले पनि यात्राको लागि अक्टुबर महिना रोजाइमा पर्छ । यो पटकको यात्रा रसुवाको गोसाइँकुण्ड तय गर्ने सोच गरे ।
विगत चार वर्षदेखि निरन्तर गरेको यात्रा सामान्यतया हिउँमा हुने गरेको थियो । यो पटक गोसाइँकुण्ड यात्रामा पनि हिउँ देख्न पाइन्छ होला भन्ने सोचेको थिएँ । तर हिउँभन्दा काला पत्थरहरु धेरै देखिए । तर पनि यात्रा रोमाञ्चक रह्यो ।
धार्मिक हिसाबले मात्र होइन प्राकृतिक रुपले पनि भरिपूर्ण छ गोसाइँकुण्ड । गोसाइँकुण्डमा स्नान र पूजा गर्नाले मनले चिताएको पूरा हुने र पाप पखालिने धार्मिक विश्वास छ । यही कारणले होला बर्सेनि हजारौंको संख्यामा भक्तजनहरु गोसाइँकुण्ड पुग्ने गर्दछन् ।
समुद्रि सतहबाट ४ हजार ३ सय ८० मिटरको उचाइमा अवस्थित गोसाइँकुण्ड हिन्दु तथा बौद्ध धर्मावलम्वीको आस्थाको केन्द्र हो । हरेक वर्ष अंग्रेजी क्यालेन्डरअनुसार अगस्ट महिनामा पर्ने नेपाली पर्व जनैपूर्णिमा र दशहराका दिन गोसाइँकुण्डमा विशेष मेला लाग्ने गर्छ ।
कञ्चनपुरमा परालको टौवामा आगलागी
कोरोनाबाट कैलाली काङ्ग्रेसका नेता न्यौपानेको निधन